Dagaal ka socda Jubadda Hoose - BBC Somali
Dagaal ka socda Jubadda Hoose
Image caption Kooxda Alshabaab ayaa weerar joogta ah ka samaysa Soomaaliya.
Wararka ka imanaya Soomaaliya waxay sheegayaan in dagaal xoog leh uu ciidammada AMISOM iyo dagaalyahannada al-Shabaab ku dhexmaray deegaanno ku yaal xadka Soomaaliya iyo Kenya.
Dadka deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose waxay sheegeen in dagaalku bilawday mar ay al-Shabaab weerar ku qaadeen kolonyo ciidanka AMISOM, kaddibna saacado badan la dagaalamay. Dadkaasi waxay kaloo sheegeen inay arkeen dayuuradaha dagaalka ee Kenya oo dagaalka ku soo biiray oo bambooyin tuuraya.
Ciidanka AMISOM waxay soo saareen war ay dagaalkaas kaga hadlayaan, waxayna sheegeen in ay duqeyn cirka ah ku sameeyeen deegaannada Caanoole iyo Kudhaay oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, si ay u burburiyaan awoodda ciidan ee al-Shabaab.
Dagaalka Caanoole waxay sheegteen inay ku dileen in ka badan 30 dagaalyahannada al-Shabaab ah, saddex baabuurta dagaalka ah iyo hal Land Cruiser-na ay ka gubeen. Weerarka Kudhay waxay sheegeen inay ku dileen tiro ka badan 50 dagaalyahan.
Wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha hawl galka Midowga Afrika ee Soomaaliya, danjire Mahamat Saleh Annadif, waxaa uu ciidanka Kenya ku ammaanay guusha dagaalka iyo sida ay weerarka ula beegsadeen bartilmaameedooda.
In ka badan toban magaalo oo muhiim ah ayay sheegeen AMISOM iyo ciidammada dowladda Soomaaliya inay hawl galladooda kaga xoreeyeen Al-Shabaab.